Aliexpress - dukaanka khadka tooska ah ee elektiroonigga, buugaagta cusub ee moodada lagu ciyaaro, tooyiska, alaabta guryaha
AliExpress - dukaan internet ah oo ah alaabada la awoodi karo oo qof walbaa ogyahay
Bal arag dhammaan
Taleefannada gacanta & Qalabaynta
Kombiyuuterka & Xafiiskaba
Alaabada lagu ciyaaro, Caruurta & Ilmaha
Dahabka & Daawashada
Boorsooyinka & Kabaha
Hoyga & Beerta, Qalabka
Gawaarida & Mootooyinka
Caafimaadka & Qurxinta, Timaha
Cayaaraha & Dibadda
Ma jiro adeegsade Internet ah oo waligiis booqan meherad lagu magacaabo AliExpress. Tani waa madal caalami ah oo caalami ah oo lagu iibinayo qeybaha kala duwan ee badeecadaha Shiinaha laga sameeyo. Faa'iidada dukaanada internetka ayaa ah miisaaniyada wax soo saarka. Suuragal maahan in la xuso isbadalka weyn ee hogaamiyaha adduunka ee ganacsiga internetka.
Aliexpress waxay ku iibisaa alaabada tafaariiqda iyo guud ahaanba . Mashruuca internetka ee AlibabaGroup waxaa loo arkaa mid ka mid ah ilaha webka ee aadka loo booqday, sidoo kale wuxuu ku kala duwan yahay wax qabadkiisa (turjumida otomaatiga ah ee macluumaadka goobta luqadaha kala duwan, jiritaanka shaandhaynta jagooyinka kala sooca, iwm).
AliExpress , waad iibsan kartaa shey kasta oo lagu soo bandhigo bogga
Adeeggu wuxuu si otomaatig ah u tarjumaa xogta ku saabsan qayb kasta oo ka mid ah nidaamka internetka si ay adeegsadayaashu u helaan fursad ay ku bartaan astaamaha alaabada, weydiiyaan cabbirrada jira, iwm.
Tag Ali Express
Muxuu yahay isku-darka dukaan internetka ah oo ka kooban?
Buugga macluumaadka ee 'AliExpress' wuxuu ka kooban yahay 13 qaybood oo mawduucyo ah - liis ay ku qoran yihiin qaybo ay leeyihiin macaamiisha dhinaca midigta ah,
taas oo ku habboon helitaanka alaabada lagama maarmaanka ah. Bilowga liistada waxaa ka mid ah qalabka guryaha, telefonada, PC-yada, qalabka xafiiska iyo alaabada elektiroonigga ah,
maadaama ay aad ugu baahi badan yihiin macaamiisha. Ka soo iibso AliExpress moodooyinka mobilada cusub iyo cajaa'ibyada kale ee teknoolojiyadda ah maahan
waxay noqon doontaa shaqaale:
Dusha sare ee bogga weyn waxaa ku yaal baar baar;
Joogitaanka qaybo hoosaad oo ka mid ah alaabada cusub, qiima dhimista daqiiqada ugu dambeysa, iwm.;
Waxaa jira xulasho dhaqaale oo alaab ah sicir qiime ah "$ 5".
U dhaqaaqista isticmaaleyaasha shabakadda internetka ee AliExpress oo ku taal rubles
Qaybaha cilmiga ah waxay bixiyaan kala sooc dheeraad ah oo alaabooyin ah kooxo faahfaahsan. Qeybta “dhamaantiin caruurta” waxay si otomaatig ah ula wadaagtaa hadiyadaha soo saareyaasha Shiinaha, sameynta koox hoosaadyo (xafaayadda, kabaha, kuraasta gaariga, iwm.).
Shay walboo jecel ayaa had iyo jeer lagu dari karaa Kartida ama Rabitaanadayda. Tirada wax soo iibsashada suurtagalka ah waxaa lagu muujiyey dusha sare ee astaamaha si markaa kadib markii aad raadsato macmiilku uusan iloobin in uu amar bixiyo. Aliexpress waxay noqon doontaa mid la fahmi karo booqashadii ugu horreysay, maadaama xitaa kuwa bilowga ah ay go'aan gaari karaan iyadoo ay uga mahadcelineyso aruurinta wargelinta ah:
Waad jeclaan doontaa;
Bixinta iyo Bixinta Gaarahaan AliExpress
Awood kale oo ah AliExpress waa qaababkeeda lacageed ee badan. Macaamiisha waxay fursad u leeyihiin inay ku bixiyaan kaararka bangiga (MasterCard, Visa, Maestro) ama isticmaalka nidaamyada bixinta elektiroonigga. Bixinta taleefanka moobaylka iyo xawaaladaha lacagta ayaa sidoo kale la heli karaa. Martida cusub ee dukaanka internetka waxaa ku jira tiro takhasusyo leh. talo soo jeedin kaa caawin doonta inaad keydiso iibsigaaga ugu horreeya iyo kuwa xiga:
Nuqullada bilowga ah;
Gunnooyinka diiwaan gelinta xariirka;
Qiimo-dhimis loogu talagalay rakibidda dalabka.
Tusaale dhiirrigelinta raadinta waa mashruuca AliExpress. Websaydhka rasmiga ah ee leh muuqaal cad, wareejin sahlan, dalabyo aad u tiro badan oo ka imanaya soosaarayaasha Shiinaha, alaabooyinka u kala soocaya qaybaha - mana aha liistada dhammaan faa'iidooyinka laga helayo ganacsiga ganacsiga internetka.
Kooxdayadu waxay la siman tahay hogaamiyaasha khadka internetka. Waxaan nahay adeeg leh awoodo farsamo oo gaar ah, kaas oo gacan ka geysta kor u qaadida deg degga ah ee goobta kujira TOP. Dammaanadda buuxda ee natiijada - haddii ay dhacdo inaad ka soo baxdid muddadii loo qabtay Ku dadaal inbadan - aaminid xirfadlayaasha kobcinta raadinta!